Wararka Maanta: Talaado, Jun 8 , 2021-Waddamada reer Yurub oo warbixin kasoo saaray doorashooyinkii ka qabsoomay Somaliland
Warbixin ay soo saareen waddamadani ayaa lagu yidhi “intii lagu guda jiray doorashooyinka, shacabka Somaliland waxay muujiyeen balan qaad adag oo ku wajahan nidaamka doorashada, ka qayb galka siyaasada iyo sii xoojinta dimuquradiyada”.
“Waxanu si gaara usoo dhawaynaynaa guushii taariikhiga ahayd ee beelaha lahayb sooca ay ka gaadheen doorashadii wakiilada iyo dhalinyarada faraha badan leh ee kusoo baxday doorashada”.
“Waanu aqoonsanahay guulihi muhiimka aha ee ay gaadheen haweenka musharixiinta ahi, lakin waxanu aad uga xunahay in aan arrinta loo turjuman karin in dumar badan la doortay” ayaa lagu yidhi warbixinta.
“Waxa muhiim ah in dhamaan dhinacyada ay khusaysa ay arrintan wax ka bartaan, dhamaan dowlada, xisbiyada iyo cidii kaleba in ay qaadan talaboyin ay ku xoojinayan ka qayb galka dumarka ee siyaasada ka hor doorashooyinka soo socda” ayaa lagu yidhi warbixinta.
“Waxa naga go’an in aanu sii wadno wada shaqayn tayadii wax dhiska ahayd, si loo horumariyo nidaamka dimuquraadiyaynta iyo ka qayb galka beelaha lahayb sooco iyo dumarka ee siyaasada” ayaa lagu yidhi warbixinta.
“Waxanu taageeraynaa doorashooyin wakhtigooda ku dhaca, waaxanu la shaqayn doona mudanayaasha cusub ee lasoo doortay iyo qadiyadaha kale ee danaha labada dhinac” ayay warbixintu ku dartay.